Saddex qof oo daabacayay shahaadooyin been abuur oo gacanta lagu dhigay | Star FM
Home Wararka Kenya Saddex qof oo daabacayay shahaadooyin been abuur oo gacanta lagu dhigay
Saddex qof oo daabacayay shahaadooyin been abuur oo gacanta lagu dhigay
Saraakiisha waaxda dambi baarista ee dalka ee DCI-da oo u fadhigoodu yahay magaalda Eldoret ee ismaamulka Uasin Gishu ayaa gacanta ku dhigay saddex qof eedeysanayaal ah.
Shakhsiyaadkan ayaa lala xiriirinaya in ay sameeyaan shahaadooyin been abuur ah .
Waaxda DCI-da ayaa dhanka kale barteeda rasmiga ee Twitter-ka ku sheegtay in gacanta ku dhigeen dokumeentiyada kala ah shahaadooyinka cadeynta booliska, Karka aqoonsiga qaran iyo dokumentiyo kale oo been abuur ah oo ay eedeysanayaashasi sameenayeen .
Eedeysanayaasha ayaa magacyadooda lagu kala sheegay George Kiplagat, Alex Kibet iyo Washington Omondi .
Dhallinyaro badan ayaa soo codsadeen dokumentiyadani ka dib markii waaxda adeega booliska iyo dhigeeda difaaca dalka ay shaaciyeen fursadooyin shaqo oo cusub .
Shuruudooyinka shaqooyinkani ku xiran ayaa waxaa ka mid ah shahaadooyinka cadeynta booliska iyo kaarka aqoonsiga qaran.
Previous articleBeesha caalamka oo ka digtay in uu baaqdo shirkii uu iclaamiyay MD Farmaajo
Next articleOxford oo qiimeyneyso waxtarka tallaalka Covid19 ee carrurta